Doorashada Mowduuca (Selecting a Topic)
Qaybtaan waxaan ugu talagnay in aan ka caawino ardayga sidii aad u dooran lahaa mowduuci uu wax ka qori lahaa. Cilmi baaristu ma’ahan wax aad u sahlan oo cid kasto samayn karto maalmo gudahood. In aad doorato mowduuca aad wax ka qorayso waa shaqada kuugu horeyso ee aad qabanayso. Waxaa laga yabaa in ay tahay qaybta ugu adag messhi laga bilaabi lahaa iyo doorashada mowdiici wixi wax laga qori lahaa.
Sababta arday uu udoorto in uu cilmi baaris ku sameeyo mowduuc gaar ah waay kala duwanaan kartaa. Mararka qaar, siyaasada jamacada u taalo ayaa ah in ardayga loo dooro mowduuca uu wax ka qoraayo. Waxaa kaloo lagayabaa in ay qarashka cilmi baarista cidkale ay dhiibayso oo ay doonayso dano gaar ah ay lihiin in loo baaro. Sidoo kale dowladaha qaar ayaa ardayda waxay siyaan wax barasho bilaash (Scholarship) gaar ahaan ardayda Ph.D diyaarinayso. Marka qofka la siiyo waxbarasho bilaash ah waxaa laga yabaa in lagu xiro in uu cilmi baris ka sameeyo mowduuc gaar ah. Hadii intaasi ay jirto adigu malihid aqtiyaar aad ku doorato mowduuca aad donaysid in aad wax ka qorto. Cutubkan waxaa uu quseyaa cida leh go, aankeeda in ay ku doorato mowduuca ay rabto in ay wax ka qorto.
Cilmi baaristu waxay u baahantahay waqti, qarash iyo adkaysi. Waxan halkan ku soo bandhigaynaa qididadah lagu doorto mowduuca wax laga qoraayo.
Waxaa muhiim ah in qofka uu doorto mowduuc uu aad u xisaynayo uu diyaar u yahay in uu waqti iyo garaad uu ku bixiyo.
Dooro mowduuc aad aqriskiisa ku raxaysanayso aadna fahmayo xogtisa hoose
Waxaa haboon mowduuca la doranayo in uu ahaado mid xiriir la leh noloshaada iyo mustaqbalkaaga shaqo. Tusaale, hadii aad jeceshahay in aad noqoto ganacsade ama aad tahay, mowduucaga ha ahaado ganacsiga iyo wax la xiriro. Hadii aad rabto in aad noqto siyaasi mowduucaga hala xiriiro siyaasada.
Mowduuca ha ahaado, mid aad horay wax uga soo baratay oo aad ku course kiisa soo qadatay oo waliba aan darajo fiican ka haysato natiijadiisa imtixaanka. Dooro madooyinka aad A ka haysato oo aad ku raxaysanaysay xiligi aad baranaysay. Haka dooran wowduuca maado aad C ka hayso ama aad ku dhacday.
Samee waxa loo yaqaan (Brainstorming) aruuri rayiyo kala duwan oo la xiriiro wowduca
Iska hubi in mowduuca aad maamuli karto (managable) xogtiisane aad heli karto
Aqri oo soo ururi xogbadan oo la xiriirto mowduuca aad rabto in aad wax ka qorto
Marwaliba oo la dooranayo mowduuc waxaa haboon in la iswaydiiyo su’alaha looyaqaan (5Ws) maxaan u doranaa moducaan? Maxaa xiiso ah uu iileyahay aniga? Rayi maka haystaa arimaha quseyo moducan?
Yuuquseyaa mowducan oo xogtiisaa laga helaa marka xog ururiska la gaaro? Ka fogow mowducyada ay kugu adkanayso in aad xogtooda hesho ama cida ay qusayso aad awoodin in aad la kulanto. Tusaale ahaan hadii xogta lagaaga bahanyahay in aad ka soo ururiso madaxda ugu sarayso dalka sida Madaxwaynaha iyo Ra,isul wasaraha iyo Wasirada. Adigane adan ahayn siyaasi awood u leh in uu la kulmo dadkaas. Waxay kugu noqonee in ay waqti dheer kaa qadato ama in aad ku guul daraysato. Marka ka taxadir cida mowduucaaga uu higsanayo in uu ka helo xogta.
Waxaa kaloo muhiim ah in aad taqaano mowduca aad wax ka qorayso qoraayaasha ugu waa wayn ee ugu caansan. Qorayasha waxay shegaan cilmi baarista mustaqbalka la rabo in la amaba qaado ee quseeyo mowducaas. (Future recommendation)
Ogow waxa ayihiin su,aalaha ugu waa wayn ee la iska waydinayo mowducan? Majirtaa dood ka taagan mowducan oo aan jawaab loohayn? Ma jirtaa oraahyo iyo aryiyo kala duwan oo laga kala qabo woducan oo la isku qilaafsanyahay? Hubi in mowducan oo meel ka bananyahay (GAP)
Is waydii hadii aan doorto mowducan ma wuxu muhiim u yahay gudaha, heer qaran mise heer caalami. Majiraa meel gaar ah uu bartilmaa maysanayo mowducaaga.
Ugu danbaynti mayahay moducaan mid hada muhiim ah oo xilagaan la joogo loo baahanyahay mise waa mid xiligiisi ka soo gudbay. Ma waxaad rabtaa in aad is bar bar dhigto xiligii hore iyo xiliga hada la joogo?. Dooro mowduuc xiligaas tagan la jaan qaadi karo. Waqti ha iskaga lumin in aad FARAACIINTI wax ka qorto. Dadka waxa jecelyihiin in ay aqriyaan xalada markaas taagan wixi laga qoray sida FACE BOOK, Viber, Whatsup. Hadii aad moduucaga yahay waxa la xiriiri aaladihi laga soo tagay sida (TYPE) ka waa hubaal in aysan jirin cid aqrinayso. Ugu danbayti dooro moduuc xiliga la jaanqadi karo.
La soco qaybaha kale isbuucyada soo socdo (Continue….)
If you would like to get research coach tell us your problems and register yourself her